आईतवार, १ मंसिर २०७६,	- AFP/RSS/Aahakhabar.	1.2K
१ मङ्सिर :
श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिमा विपक्षी दलका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नु भएका पूर्व रक्षामन्त्री गोटाबाया राजापाक्षे निर्वाचित हुनुभएको छ ।
उहाँले सपथग्रहण कार्यक्रम एक दुई दिनमा हुनसक्ने बताउनु भयो ।
को हुन् राजापाक्षे ?
राष्ट्रपतिमा नवनिर्वाचित राजापाक्षे पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेका भाइ हुनुहुन्छ ।
मतदानमा उल्लेख्य सहभागिता
निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष महिन्दा देशाप्रियाले शनिबार भएको मतदानका क्रममा कुल मतदाता मध्ये झण्डै ८० प्रतिशत मतदाता सहभागी भएको बताउनुभयो ।